केटाले “एक रातको लागि केटी पाईन्छ” भनेपछि..धरधरी रोईन, टिका सानु ! (भिडियो हेर्नुहोस)
टिका सानुलाई केटाले “एक रातको लागि केटी पाईन्छ” भनेपछि..धरधरी रोईन ! (भिडियो हेर्नुहोस)
केही समय अगाडि गित संगीत पारखिको ढुकढुकीको रुपमा परिचित ईन्द्रेणी कार्यक्रममा संगै दोहोरी गाएका शिशिर खड्का र टीका सानुले फेरि एकपटक संगै दोहोरी गाएका छन ।
मनोरंजन को साथ-साथमा विभिन्न समाजसेवा गर्दै आइरहेको इन्द्रेणी टिम ,देश-विदेश मा छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालि हरु को मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ ।
खास गरि प्रदेश मा रहनुहुने दाजु-भाई दिदि बहिनि हरुको मन जित्न सफल छ । विभिन्न समाजसेबी को साथ लिएर इन्द्रेणी टिम ले धेरै गरिब दुखि हरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
यस्तै शिशिर भण्डारी एक कुशल कलाकार हुनुका साथसाथै समाजसेवी ब्याक्ती पनि हुन । उनले धेरै दुखी पीडितहरुलाई सहयोग गरेका छन । निकै चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता तथा कलाकार शिशिर भण्डारीले आफ्नो जीवनका केहि रहस्यहरु खोलेका छन् । स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेलसँग कुरा गर्दै शिशिरले आफु बिवाहित भएको बताएका छन् । त्यसो त शिशिरले यो कुरा अन्तर्वार्ताहरुमा पनि भनेका हुन् । यद्यपी उनी बिवाहित हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन ।
धादिँगका शिशिरले आफु बिज्ञान बिषय पढ्न काठमाडौं आएको, सानैदेखि गायनमा रुचि भएकोदेखि बिवाहित मात्रै हैन आफ्ना २ छोराहरु रहेको पनि बताएका छन् । असिम र अनुरोध नामका शिशिरका दुई छोराहरु छन् । शिशिर राम्रो कलाकार, क्यारिकेचर मास्टरसँगै उनी गायक पनि हुन् ।
* केही समय अगाडि गित संगीत पारखिको ढुकढुकीको रुपमा परिचित ईन्द्रेणी कार्यक्रममा संगै दोहोरी गाएका शिशिर खड्का र टीका सानुले फेरि एकपटक संगै दोहोरी गाएका छन । मनोरंजन को साथ-साथमा विभिन्न समाजसेवा गर्दै आइरहेको इन्द्रेणी टिम ,देश-विदेश मा छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालि हरु को मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ ।
खास गरि प्रदेश मा रहनुहुने दाजु-भाई दिदि बहिनि हरुको मन जित्न सफल छ ।विभिन्न समाजसेबी को साथ लिएर इन्द्रेणी टिम ले धेरै गरिब दुखि हरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यस्तै शिशिर भण्डारी एक कुशल कलाकार हुनुका साथसाथै समाजसेवी ब्याक्ती पनि हुन । उनले धेरै दुखी पीडितहरुलाई सहयोग गरेका छन ।
निकै चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता तथा कलाकार शिशिर भण्डारीले आफ्नो जीवनका केहि रहस्यहरु खोलेका छन् । स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेलसँग कुरा गर्दै शिशिरले आफु बिवाहित भएको बताएका छन् । त्यसो त शिशिरले यो कुरा अन्तर्वार्ताहरुमा पनि भनेका हुन् । यद्यपी उनी बिवाहित हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन ।
** केही समय अगाडि गित संगीत पारखिको ढुकढुकीको रुपमा परिचित ईन्द्रेणी कार्यक्रममा संगै दोहोरी गाएका शिशिर खड्का र टीका सानुले फेरि एकपटक संगै दोहोरी गाएका छन । मनोरंजन को साथ-साथमा विभिन्न समाजसेवा गर्दै आइरहेको इन्द्रेणी टिम ,देश-विदेश मा छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालि हरु को मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ ।
धादिँगका शिशिरले आफु बिज्ञान बिषय पढ्न काठमाडौं आएको, सानैदेखि गायनमा रुचि भएकोदेखि बिवाहित मात्रै हैन आफ्ना २ छोराहरु रहेको पनि बताएका छन् । असिम र अनुरोध नामका शिशिरका दुई छोराहरु छन् । शिशिर राम्रो कलाकार, क्यारिकेचर मास्टरसँगै उनी गायक पनि हुन् । भिडियो हेर्नुहोस ।